Agile Kushambadzira Shanduko, Kwete Shanduko, uye Nei Uchifanira Kuitora Iyo | Martech Zone
China, Gunyana 18, 2014 Svondo, October 4, 2015 Jascha Kaykas-Wolff
Kubva pakuvaka zvivakwa kune software yekuvaka.
Muma1950 ma Waterfall Development Muenzaniso yakaunzwa mukugadzirwa kwesoftware uye kusimudzira. Iyo sisitimu ndeye relic yeindasitiri yekugadzira uko, nekudikanwa, mhinduro chaiyo yaifanira kutangwa basa risati ratanga. Uye, munyika iyoyo, mhinduro kwayo ine musoro! Unogona here kufungidzira mamiriro apo iwe wakasarudza kuvaka skyscraper zvakasiyana hafu nzira kuburikidza nekuvaka?
Izvo zvakati, chibereko chekushandiswa kweichi chiitiko mukugadzira software ndechekuti dhizaini yesoftware (ficha + ux) yaifanirwa kuve rudyi kumberi. Yakajairika budiriro kutenderera yakatanga neKushambadzira ichiita imwe tsvagurudzo pamusika uye dambudziko uye nekupa maonero avo muchimiro cheMusika Zvinodikanwa Gwaro uye / kana Chigadzirwa Zvinodikanwa Gwaro. Timu yekusimudzira yaibva yazvivharira pasi ndokuvaka izvo timu yeKushambadzira yaiti musika waida uye pavakapedza vakadzosera chigadzirwa chakapedzwa kuchikwata cheKushambadza icho chakabatsira kuchiendesa kumutengi. Uyu muenzaniso wakashanda. Uye yakashanda chaizvo kumakambani akaita seMicrosoft.
Chimwe chinhu chiri kushaikwa mukuita uku. Mutengi.
Iyo Sangano Anarchists
Vanopesana neMad Men vanosvika.
Kugadzira Chikamu cheAgile muHierarchical Bhizinesi
Zvinhu zvitatu zvinotungamira zvekuchengetedza mupfungwa
Agile ndeye Nezve Hutungamiri, Kwete Kuwedzera Management
Chii Chinotanga seKutenderera Kwemaziso Kunogona Kuva Kuvhura Kwemaziso- kana Iwe Uchirega Icho
Mukupera kwema90 mainternet yaive ichikurumidza kukura kuita yebhizimusi hotbed yakarongedzwa nemakambani matsva einternet uye, zvingangonyanya kukosha, yaive kutanga kupa nzira inoshanda yekuendesa software. Kwakanga kusisiri iye mugadziri aifanirwa kuendesa yavo yekupedzisira chigadzirwa kune Yekutengesa timu pane tenzi wegoridhe ivo vavaigona ikozvino kuendesa yekupedzisira kodhi yakananga kuInternet uye yakananga kumutengi wavo.
Nekutumirwa kwesoftware yavo yakanangana nemutengi, ivo vanogadzira uye vagadziri vaive nekwaniso yekuwana dhata yakawanda nezvekuti chigadzirwa chavo chaishanda sei. Kwete yemhando yepamusoro mhinduro kubva Mukushambadzira asi chaiyo vatengi kutaurirana data. Ndeapi maficha akashandiswa uye anga asiri! Nhau dzese dzakanaka handiti? Aihwa.
Iyo Waterfall Development Model uye yayo bhizinesi maitiro ayo ayo ekupedzisira hafu yezana ramakore airatidza kubudirira nzira yakamira kushanda. Izvo hazvina kubvumidza chaiyo-nguva mhinduro. Pakange pasina pfungwa yekukurumidza kuitisa.
Muna 2001 boka revagadziri uye vanofunga vehurongwa vakasangana pa Resort mumakomo eUtah kukurukura kuti maitiro matsva angagonesa sei kubatana kuri nani kune vatengi uye zvinoguma nezvikwata zvine simba uye software iri nani. Mumusangano iwoyo Agile Kubudirira kufamba kwakazvarwa uye iko zvino kwaonekwa seye yakakosha sisitimu yekuvaka software. Funga zvakaoma nezvenguva yekupedzisira pawakasangana nechikwata cheinjiniya icho chaitaura nezve backlog yavo uye yavo yazvino sprints ... zvakadzama kuti nekukurumidza uye zvizere sei ino system yakagamuchirwa.
Sezvo hama dzedu dzenjinjiniya dzaibata neimwe yekuvhiringidza maitiro achichinja nguva munguva yapfuura zana Kushambadzira kwakamira neasina kubatika. Yedu bhenefiti kubva kuchangobva kuwanikwa agility muinjiniya ndiko kugona kwedu kutaura izvozvo Zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa zvichiramba. Zvimwe kunze kweizvozvo, isu takapofomara tichitora nzira dzebhizimusi uye masisitimu atanga tichishandisa kwemazana zana apfuura + makore. Iyo seti yemaitiro akataridzika eerily akafanana neiyo Waterfall Development Model.
Kushambadzira kwakauya ne rudyi pindura muchimiro chemushandirapamwe, mutsetse wetsiva, mucherechedzo wobva waenda kudzamara tapedza tisati tabuda pabasa redu kuti tinyore basa redu mune chiteshi chinotungamira. Uye nei taizochinja? Iyi nzira yakaedzwa uye yechokwadi yakashanda kwemakumi emakore. Asi hazvichashanda futi isu tine Dorsey naZuckerberg wekutenda.
Kuzivikanwa kwemasocial network kwaita kuti zvive nyore kwazvo kune vatengi vedu uye tarisiro yekupindura kumisangano yedu, tagline uye marogo en mass. Icho chinhu chakanaka handiti? Izvo zvinofanirwa kuve zvakadaro, mukushambadzira, isu takagumburwa mukukwanisa kwedu kupindura nekuda kwekushomeka kwemabhizinesi maitiro. Hatisi vanonetsekana.
Muna 2011, muSan Francisco, boka revashambadziri rakasangana kuti rikurukure shanduko yemagariro nehunyanzvi iyo inoda kuti zvikwata zvekushambadza zvishande zvakasiyana. Kuzivikanwa kuti kufanana pakati peinjiniya nekutengesa kwaive kwakakodzera uye kuti Agile Development Manifesto inofanira kunge iri yemhando yeKushambadzira.
Pamusangano uyu wakapihwa zita Sprint Zero ava vatengesi vakanyora iyo Agile Kushambadzira Manifesto uye pamusoro pemakore matatu apfuura takaona pfungwa yeAgile Marketing ichitanga kubata.
Chii chinonzi Agile?
Agile inzira yakarongeka yekusangana nezvinodiwa, zvezuva nezuva zvebhizinesi, uchiri kuchengetedza imwe "isingagone" nguva yekutsvaga mikana mitsva uye kuyedza. Iyo pendulum inogara ichichinjika pakati pezvinhu zvitsva (kuuya nemazano matsva uye kuyedza mhinduro dzemanovel) uye kushambadzira (ona kuti ndeapi mabasa vatengi vaunoda kuti uvaitire ivo) uye kuve nekukasira kunokutendera kuti ugadzirise kukoshesa kwezvose.
Ngatitaurei chokwadi. Kunyangwe zviri kukonzerwa nezvazvinotadzisa chaiko kana zvetsika, mabhizinesi mazhinji anonzwa kuti havana nguva kana mari yekuyedza - uye pamwe havatombo. Asi pasina kuyedza, mamiriro quo mabhizinesi anozopedzisira arasikirwa nemabhizinesi anovhiringidza. Kusayedza kunoenderana nemikana mitsva yebhizinesi kwakafanana nekutaura kuti wakabatikana zvikuru kuita raramo yekudzidza, kukura, uye kuchinja muhupenyu hwako.
Dambudziko rakajairika rinokumbira iwo mubvunzo:
Ko kambani yako ingaite sei mari pazvinetso zvemazuva ano zvinokasira-moto uchiri kusangana nenhamba pfupi-pfupi uye yenguva refu yemari?
Ini ndinotenda mhinduro ndeye kushandisa miitiro yeagile, iyo inosanganisira akawanda madiki, kuyerwa, ekutsvagisa nhanho-kwete imwe hombe, inodhura, yakavezwa-mumatombo zano. Mune mamwe mazwi, agile ndiyo anti-Mad Men nzira.
Agile inopa mukana wekutsvaga pfungwa dzisingazivikanwe mukati medanho rakagadzikana iro rinopa hunyanzvi nematanho akavimbika ekugona. Iyo nzira yekuyedza zvinhu zvitsva uye uchiri kugadzira nhamba dzako. Chimwe chipingamupinyi chikuru mukuvandudza ndechekuti tsika yechinyakare yekambani masisitimu haabatanidzi vazhinji vevashandi vane hunyanzvi nedudziro yebasa, nezvematongerwo enyika, uye nekuzvidzivirira kuita njodzi.
Kotter inonyora iyo zvinhu zvisere zvinodiwa inodiwa kuti bhizimusi rechinyakare ritange kusimudzira tsika dzinoongorora kubva mukati. Izvi ndizvo zvimwe zvinhu zvinodikanwa kukudziridza zviito zveagile, ndinotenda.
Kukurumidzira kwakakosha - Mukana webhizinesi kana tyisidziro inofanira kukurumidza zvakakwana kukurumidza kuita chiito. Rangarira nzou. Anomhanya pamanzwiro. Tsvaga tyisidziro yaanogona kupinda mairi.
Gadzira mubatanidzwa unotungamira - Kune avo vanoda kuve chikamu cheiyo itsva agile network, ivo vanofanirwa kuuya kubva kumadhipatimendi akasiyana uye vane huwandu hwakazara hwekutarisira uye masimba mukati mehutongi. Uye, pamwe zvinonyanya kukosha, nhengo dzemubatanidzwa dzinofanirwa kuve vanozvipira kunetiweki isinganetsi. Uku ndiko kuda kuita boka revanhu, kwete kuti uve neboka.
Iva nechiratidzo kuburikidza nekuvandudzwa kwezvirongwa, mibvunzo kuti uwane mhinduro, bvunzo dzekuyedza. - Chero chero mukana webhizinesi, gadzira zano rezvaunotarisira kuti iwe ongororo zvioneke. Kunyangwe kana zvisiri izvo, vanofanirwa kushandira kukurudzira chishuwo chishuwo chekuziva. Chiratidzo chinofanirwa kukwidza zvido uye kuda kuziva.
Taura chiono chekutenga-mukati kubva kune vamwe vakasara boka uye iyo kambani seyakazara. - Taura zvaunofungidzira zvakajeka. Ivo havafanirwe kuona pane, asi ivo vanofanirwa kuve vanonakidza. Ipa munhu wese zano rekuti nei wakasarudza imwe danho rekutarisa uye kusarudza munyori akanaka anokwanisa kuzvitaura zviri nyore, nyore mutauro.
Ipa simba rakapamhama-kuita. - Simba rehutongi nderowo hwakanyanya kushaya simba. Zvese zvekutora sarudzo zvinoiswa kumusoro. Mune agile network, mazano uye hunyanzvi zvinogona kubva kune chero munhu. Kunyangwe paine mubatanidzwa unotungamira, chinhu ndechekubvisa zvipingaidzo, kwete kuchengetedza cheni yemirairo. Iko kushushikana ndiko hutongi huri kuyedza kudzoreredza kutonga.
Pemberera zvidiki, zvinoonekwa, zvenguva pfupi kukunda. - Yako agile network haigare kwenguva refu kutoti iwe ukaratidza kukosha zvakaringana. Hierarchy vanokakavara vanokurumidza kupwanya zvaunoedza, saka usaende muhombe ipapo. Ita chimwe chinhu chidiki. Sarudza chinowanikwa. Zviite zvakanaka. Dzidzira maitiro agile. Izvo zvichavaka kukurumidza.
Usarega. - Panguva imwechete yaunoda kukunda, usataure kukundwa kwakanyanya nekukurumidza. Agile ndezvekudzidza kubva pazvikanganiso uye kugadzirisa. Ramba uchisundira kumberi, nekuti iwe paunobvisa rutsoka rwako pagasi, ndipo panogona kuramba tsika nemagariro. Ita nguva yezvirongwa zvako zve network. Namatira pairi, kunyangwe zviitwe zvakadii, basa rakabatikana rinobuda.
Sanganisa shanduko uye izvo zvidzidzo zvinodzidziswa mutsika yebhizinesi rese. - Aya ndiwo maratidziro agile network inogona kuzivisa hutongi. Paunowana nzira dziri nani dzekuita chimwe chinhu kana mikana mitsva yekutevera, ishandire kune iro "rimwe" divi.
Kwete chete aya matanho masere eKotter kiyi yekubudirira, asi iye anopa matatu anotungamira maitiro ekuchengeta mundangariro.
Matanho masere acho haana kutevedzana. Matanho aya ndeemhando, kwete maitiro kana maitiro - chimiro, kwete kuenderera kwakarongeka. Izvo zvese zvinofanirwa kuitika, asi hazvifanirwe kuitika mune chero zvakarongeka. Usarasikirwe nemhepo kunetseka zvakanyanya nezve order.
Iyo agile network inofanira kunge yakaumbwa neanozvipira mauto. About 10% yevashandi inokwana, sekureba sekunge vanhu vari mumambure vanoda kuve varipo. Usave wakasarudzika kana kuvharwa kuti utore chikamu, asi zvakare usaedze kutora vanhu vane 100% vane hunhu hwakajeka, nekuti havazofarire kuvepo uye havazoone kukosha kwayo. Sekutaura kwaKotter, "Uto rezvipiri harisi bhurugwa rekuita mirairo kubva kubhuronzi. Nhengo dzayo vatungamiriri vanochinja vanounza simba, kuzvipira, uye kushingairira."
Iri boka rinononoka rinofanirwa kushanda nevanhu vanoshanda mukati mehutongi, asi rinofanirwa kuchengetedza netiweki yekushanduka uye kugona. Iyo network yakaita senge yezuva ine mubatanidzwa unotungamira uri pakati nepakati uye zvirongwa zvidiki zvinouya pamwechete uye zvinopararira pazvinenge zvichidikanwa. Netiweki haigone kutariswa se "mashandiro ane hutsinye" kana vakuru vakuru vanozoipwanya.
Agile mutambo wekudzidzisazve nzvimbo yemazuva ano yebasa kuitira zvirinani kuona, mukana, mhinduro, kubvunza, kuda kuziva, chiito chakafemerwa uye kupemberera. HaIYO manejimendi manejimendi, ongororo yebhajeti, kushuma, ngetani yekuraira, muripo kana kuzvidavirira kune veMad Men vese-mune zano. Iwo masisitimu maviri musangano RIMWE rinoenderana - kwete kuteedzerana - imwe neimwe. Zvakanakisa, vashandi vanokura muiyo agile network vanogona kuunza iyo nyowani simba kuhutongi, zvakare.
Iyo nyowani agile network inogona kutanga kunzwa seimwe hombe, yakapfava, squishy, ​​yevashandi yekuita kurovedza muviri. Zvakanaka! Inochinja. Haisi kuchinja kamwe kamwe kana kunoshamisa. Kufanana nemaitiro ekuvaka timu, zvinotora imwe nhanho yekunyaradza uye kuvimba kunovandudzwa nekufamba kwenguva.
Ramba uchienda. Chengeta matanho madiki. Taura kukunda kubva pakutanga. Tora tsoka dzako pasi pako iwe paunenge uchitengesa network isingabvumirwe kune hutongi huripo. Kana iwe ukaita zvese izvi, kukosha kwebhizinesi kuchabuda pamberi pehutongi husingarambe sehupenzi, zvakasiyana, kutambisa nguva, kana chero chipi chinofambiswa chinowanzobuda mu90% kukanda gumi.
Nhasi kutambisa nguva inotungamira kune ramangwana zano hombe. Agile basa-sekugadzira pachayo-hausi mutambo we 95%-kana-zvirinani zvibodzwa zverubatsiro. Dai zvaive, saka munhu wese aizozviita.
Uye kwaisazove nemukana, dai munhu wese aizviita.
Kukura Nekukurumidza. Nei Agile Kushambadzira Uye Bhizinesi Isingori Yechokwadi Asi Inodikanwa.
Tags: Agilekushambadzira kwekushambadziramaitiro agilebhizinesi zanokukura nekukurumidzautsanziJascha Kaykas-Wolffkottervanopenga varumeMarketinghutungamiri hwekutengesaMarketing nziramapopoma ekuvandudza modhi
Jascha Kaykas-Wolff anotenda mumisimboti miviri yakakosha: Tsvaga mikana uko pasina mumwe munhu arikutarisa; Uye, usambofa wakundikana nenzira imwechete kaviri. Iyo nzira yakanangana nekutenderera kweAgile maitiro. Yakasangana neBA in Psychology kubva kuWhittier College, ndiyo yakamushandira zvakanaka nehunyanzvi uye pachezvake. Semutengesi wenguva refu uye chipangamazano nevakuru maneja manejimendi kuYahoo!, Microsoft, Webtrends, Involver (yakawanikwa naOracle), uye Mindjet, iye zvino anotungamira kushambadzira ku BitTorrent.
Maitiro Ekuyera Kudzoka paInvestment yeSocial Media